इज्जत कसको जान्छ ?- विचार - कान्तिपुर समाचार
श्रावण २४, २०७६ सविता विमली
साउन लागिकनको कुरा । कक्षा एघारको उत्तरपुस्तिका परीक्षण सुरु भइसकेको थियो । निम्न रक्तचापबाट तंग्रिदै थिएँ म । साथीहरूले आइज भनिरहेका थिए । गइहाल्ने जाँगर थिएन । केही दिनपछि पुगें मध्यवानेश्वरस्थित एम्बिसन कलेज । जाँदाजाँदै एउटी साथीले तानेर कुनामा लगी र सुनाई भर्खरै अर्की साथीमाथि भएको एउटा अभद्रता ।
एउटै व्यक्ति वर्षेनि फरकफरक व्यक्तिमाथि फरकफरक रूपले प्रस्तुत भइरहेको थियो । र, सबैभन्दा ताज्जुब चाहिँ, ऊ विद्यावारिधि उपाधिप्राप्त उपप्राध्यापक हो । उसको अभद्र टिप्पणी पनि एउटी उपप्राध्यापक सरहकी महिलामाथि हो । र, यस मामिलामा मैले नै थाहा पाएका सन्दर्भमा ऊ पटके पीडक भइसकेको थियो ।
‘बहिनी’ वा ‘म्याम’ सम्बोधनमा असाध्य मीठो बोलेर प्रस्तुत हुने ऊ बडो ज्ञानी र भलादमी प्रतीत हुन्छ । उसको बोली र सामान्य व्यवहार हेरेर मात्रै उसलाई कसैले चिन्नै सक्दैन । दुई वर्षअघि अर्की साथीले मलाई भीडबाट पर लगेर सुनाई केही महिनादेखि गुम्सिएको पीडा । चोकैमा बासस्थान भएकी उसको घर खोज्दै त्यो उपप्राध्यापक ढोकैमा पुगेछ । सानो छोराले खोलेको ढोकाबाट चियाएर श्रीमान् पनि भएको थाहा पाएपछि ऊ ठाडै खुट्टा आएकै बाटो फर्किएछ ।
उसका श्रीमान् घरमा नभएका भए ऊ के गर्थ्यो ? अर्काको घरमा नबोलाई खोज्दैखोज्दै गयो किन ? नजानु गइसकेपछि घरमा भएका मानिससँग सामान्य औपचारिकता निर्वाह नगरी फर्कियो किन ? ऊ त्रस्त थिई थुप्रै महिनादेखि । अरू साथीसम्म पनि यो कुरा पुग्यो । हामीले चुपै बस्ने र ऊसँग सम्पर्कमा नरहने निधो गर्‍यौं । नारीले धर्ती हुनुपर्छ भन्ने आदिम अर्तीले सम्भवतः हामीलाई रोक्यो । हामी दुईचारजना तर्किरह्यौं ।
यी दुईचार जनाभन्दा बाहिरका साथीहरू भएका बेला हामी उसलाई ‘इग्नोर’ गर्न सक्दैनथ्यौं । त्यो इग्नोरको पनि गलत व्याख्या हुने भय थियो सायद हामीमा । हामीसँग बोलचाल भए पनि ऊ घर खोज्दै गएकी साथीछेउ पर्न सकेको थिएन । उसलाई परबाटै पढिरहेका थियौं हामी । यहीबीच उसका केही पुराना किस्साले हामीलाई चकित पारिरहेका थिए ।
यस पटक फेरि आफ्नो पेसा, शिक्षा, उमेरलाई बिर्सिएर ऊ यस्तो अभद्र भइदियो, पुनः कसैलाई चुप रहौं भन्न सकिएन र यो हामी महिलामा मात्रै सीमित पनि भएन । अभिभावकजस्ता लाग्ने, पेसागत राजनीतिमा राम्रै हैसियत बनाएका शिक्षक नेतासम्म कुरा पुग्यो । चुपचाप–चुपचाप यसको चर्चा भयो ।
केही दिनपछि नेकपाका ती शिक्षक नेता दाइ बोले, ‘केही भनिहाल्दा/गरिहाल्दा हामीलाई नै पो अप्ठ्यारो पर्ला कि ! हाम्रै इज्जत जाला कि !’ उनले केटीहरू आँसु खसाएर जित्न खोज्छन् भन्ने संकेत गरे । मैले प्रतिरोध गरें, ‘हामी रोएका हैनौं, बोलेका हौं । अघिल्लो पटक हामी चुप लागे पनि उसको व्यवहार सुध्रिएन ।’ इज्जत र आँसुका नाममा उनले फेरि हामीलाई नबोल्न भनिरहे ।
महिलाको आत्मसम्मानमा लागेको घाउ हामीलाई नै तर्साउने हतियार मात्रै भएको देखेर स्तब्ध भएँ म । मेरो प्रतिक्रिया अविवाहित केटीको तातो आवेग मात्रै बनेको रहेछ मेरा पुरुष सहकर्मी मित्रहरूका लागि ! उनीहरू भनिरहेका थिए— जो पीडित छ ऊ बोलेकी छैन, किनकि ऊ विवाहित हो । अब तँ पनि चुप लाग् ।
ऊ बोल्दिनँ किनकि ऊ बोली भने उसको परिवारको जग हल्लिन्छ र कुनै विवाहित महिला आफ्नो परिवारको विघटनसँग सदैव तर्सिन्छे । बरु मौन बस्छे । आफूमाथि भएका सारा दुर्व्यवहार चुपचाप सहन्छे, पचाउँछे किनकि बोल्नेबित्तिकै उही दोषी हुन्छे । त्यसैले ऊ कहिल्यै बोलिन । र, अब पनि उसले बोल्न हुँदैन भनिरहेछ समाज । सबैभन्दा दुःखको कुरा, यसो भन्ने समाज शिक्षित, चेतनशील, राजनीतिक चेतले सम्पन्न र वर्षौंदेखि शिक्षण पेसामा आबद्ध व्यक्तिहरूको हो ।
उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्ने थलोमा यस प्रकारका अभद्रताको विरोधमा कठै भनेजस्तो गरी हाम्रो आवाजलाई अलमल्याइयो । अनि भन्नैपर्‍यो— यहाँ भएका महिला कसैका छोरी, पत्नी र आमा हुन् । यी आफ्नै स्ववर्गीय विद्वान् भनिएका शिक्षक मित्रहरूकै बीचमा भयभीत हुनुपरेपछि सम्झनुस्, तपाईंका घरका पत्नी र छोरी पनि सुरक्षित छैनन् । उनीहरूलाई पनि कसैले यसरी नै दागा धरिरहेका होलान् !
यसरी एउटा पटके पीडकले निर्धक्क उपस्थिति जनाइरहँदा एउटा सिंगो वर्ग चुपचाप खुम्चिन पुग्यो । जसलाई अन्याय भएको हो उही बोल्नुपर्छ, अरू चुप लाग भनियो । ऊ नबोलेकी होइन । कति जनासँग उसले सम्झनै मन नलागेको कुरा दोहोर्‍याओस् ! त्यो उपप्राध्यापकको टिप्पणीबाट ऊ स्तब्ध थिई । उत्तरपुस्तिका परीक्षण गरिरहेकी उसलाई बोलाईबोलाई त्यो पटके पीडक विद्यावारिधिले उसका स्तनका नाममा प्रतिक्रिया दिएको थियो ।
केही काम होला भन्ठानेर नजिक पुगेकी उसको त्यो सुनेर बोली हराएको थियो । ऊ भन्छे, ‘म त यस्तो सक्ड भएँ कि, केही सुझ्दै सुझेन ।’ स्कुले शिक्षा सक्न लागेको सन्तानकी आमा ऊ फेरि त्यसको छेउछाउ परिन । जसरी आफ्ना छेउमा बोलाएर विद्यावारिधिले टिप्पणी गरेको थियो, उसै गरी उसका छेउमा आएर गल्ती भो भन्ला भन्ने थियो, तर अहँ ।
आफू बोल्दा ‘उही उस्ती होली अनि नै उसले त्यति भन्यो’ भन्लान् भन्ने भयले ऊ तर्सिरही । किनकि, महिलाको स्वरलाई कुल्चिने अस्त्र भनेकै उसमाथि आइलाग्ने लाञ्छना हो, बात हो । यो अस्त्र यस्तो गाण्डीव हो, जसले महिलाका नामका तमाम महाभारतलाई सजिलै हराउँदै आएको छ ।
केही हुनलाई महिला उस्ती हुनैपर्दैन भन्ने कसलाई थाहा ? कसले पत्याउँछ ?
प्रकाशित : श्रावण २४, २०७६ ०८:३१